Global Voices teny Malagasy » Tatitry ny Fangaraharahana : Miakatra Be ny Fangatahana avy any Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Febroary 2015 3:08 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Akon'ny RuNet
Namoaka ny tatitra mangarahara  ny Twitter farany teo, mampiseho fa niakatra 40 isanjato ny fangatahan'ny governemanta ny mombamomba ny kaontin'ny mpiserasera hatramin'ny tatitra farany nataon'ny Twitter tamin'ny Jolay 2014. Nilaza ny Twitter fa naharay fangatahana marobe avy amin'ny firenena manerantany izy, saingy “miavaka” kosa ny firenena telo: Torkia, Etazonia, ary Rosia. Tao Rosia, niainga tamin'ny tsy naharaisana fangatahana tany am-boalohany ka tafakatra mihoatra ny 100 ny fangatahana mombamomba ny kaonty nandritra ity fotoana taterina ity. Tsy manome na inona na inona izahay ho valin'izany fangatahana rehetra izany,” hoy ny tatitry ny Twitter.
Nanampy tamin'ny fiakarana 84 isan-jato ihany koa i Rosia tamin'ireo “fangatahana tohanan'ny governemanta sy fangatahan'ny governemanta manerantany hanaisorana ireo vontoaty ao amin'ny Twitter,” nandefa fangatahana 91 tahaka izany tao amin'ny Twitter hatramin'ny Jolay 2014. “Ny fangatahana dia misy hatramin'ny fampiroboroboana fanafody tsy ara-dalàna ka hatramin'ny fikasana hanaisotra ireo fihetsiketsehana milamina” hoy ny Twitter. “Raha nahita izahay fa mifanaraka amin'ny fitsipika ny 13 isanjaton'ny fitakiana, dia nolavinay ny fangatahana maro hanampim-bava ireo mpitsikera malaza ny governemanta Rosiana sy fitakiana hafa hametra ny fanehoan-kevitra momba ny fihetsiketsehana milamina ao Okraina.”
Nanomboka  namoaka tatitra mangarahara ny Twitter tamin'ny 2012. Hatreo, orinasan'ny teknolojia malaza hafa mihoatra ny 30  no nanaraka izany. “Zavatra tsara tokony atao ny manome izany vaovao anatiny izany” hoy ny Twitter tamin'ny fanambarana androany vao maraina, “indrindra amin'izao taonan'ny ahiahy tsy mitsaha-mitombo momba ny fanaraha-maso ataon'ny governemanta izao”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/02/12/67488/
 tatitra mangarahara: https://transparency.twitter.com/